साँचो प्रेम हो या मात्र आकर्षण भनेर कसरि थाहा पाउने ? – Newsharpal24
हामी सबै कुनै न कुनै समयमा प्रेममा पर्छौं। जब यो भावना हाम्रो दिमागमा आउँदछ, हामी यो विश्वास गर्न थाल्छौं कि यहि प्रेम मात्र सत्य हो र अरु सबै कुरा झुटा हुन्। जब मानिषलाइ प्रेम हुन्छ तब ऊ आफ्ना सपनाहरु अरु कसैको सोच संग बाँड्न सुरु गर्छ।
तर के यो नै हो त साँचो प्रेम? केहि चीजहरू छन् जसलाई साँचो प्रेमको आधार मानिन्छ। यदि तपाईंको प्रेम सत्य हो भने तपाईंले यी चीजहरू कुनै न कुनै समय महसुस गरेको हुनुपर्छ र यदि तपाईंले त्यस्तो महसुस गर्नु भएको छैन भने अझै पनी समय छ। साँचो प्रेम कुनै पनि उमेरमा फेला पार्न सकिन्छ।